လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Dan Chugg အား လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေး
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်သည် မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Dan Chugg အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့၊ ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၇)၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် UK Aid အစီအစဉ်ဖြင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လေအား လျှပ်စစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်မည့် စီမံကိန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ စီမံကိန်း ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်း လေ့လာပြီးမြောက်မှုအခြေအနေ၊ မိုးလေဝသအချက်အလက်များ၊ တာဘိုင်များ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေများ၊ ဓာတ်အားလိုင်းသွယ်တန်းမှုနှင့် ESIA ​လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုမရှိစေရေး၊ နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ လက်ရှိ ဓာတ်အားလိုင်းစနစ်များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေမည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့် ဒီဇိုင်းပုံစံများ အသုံးပြုရေး၊ စီမံကိန်းအတွက် ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ ပြန်လည် ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနှင့် UK အစိုးရအနေဖြင့် ပံ့ပိုးထောက်ပံ့ ပေးနိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ Green Finance အလားအလာနှင့် အခွင့်အရေးများ၊ Technical Assistant for Capacity Building and PPA Negotiation နှင့် စံချိန်စံညွှန်း ဆိုင်ရာ Training Program များ၊ UK တွင် ၂၀၂၀ နှစ်ကုန်၌ ကျင်းပမည့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှု တားဆီးနိုင်မည့် COP 26 နိုင်ငံတကာညီလာခံအစီအစဉ်များ စသည်တို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ဝင်း၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးတင်မောင်ဦး၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံရုံးနှင့် Department for International Development Myanmar (DFID) တို့မှတာဝန်ရှိသူများနှင့် လေအားလျှပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။